यस्ता हुन्छन् ग्यास्ट्रिकका लक्षण, कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
यस्ता हुन्छन् ग्यास्ट्रिकका लक्षण, कसरी बच्ने ?
सुमित्रा लुईंटेल	|| 29 May, 2021
डा.सन्दिप राज कुँवर, पेट रोग विशेषज्ञ
हिजोआज ग्यास्ट्रिकको समस्या नभएको मान्छे फेला पार्न मुस्किल पर्छ । त्यसैले धेरैले यसलाई राष्ट्रिय रोगको संज्ञासमेत दिन्छन् । ग्यास्ट्रिकलाई समयमै पहिचान गरी निर्मुल पार्न सकिएन भने यसले अल्सर र क्यान्सरसम्मको समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्रिकलाई कसरी पहिचान गर्ने ? यसका लक्षणहरु के–के हुन्छन् ? ग्यास्ट्रिक बिग्रन नदिन के गर्ने ? यसबाट बच्ने उपायहरु के–के हुने भन्ने बारेमा पेट रोग विशेषज्ञ डा.सन्दिप राज कुँवर को सल्लाह यस्तो छ :
सामान्य अर्थमा ग्यास्ट्रिक भनेको पेटमा ग्याँस भरिनु हो । यसलाई धेरै सामान्य जस्तो ठाने तापनि यसले कालान्तरमा विकराल रुप लिन सक्छ । जब ग्यास्ट्रिक बढ्दै जान्छ यसले पेटको माथिल्लो भाग पोल्ने, दुख्ने, बान्ता होला जस्तो हुने, खाना अरुची हुने, पेट ढुस्स फुलेको वा भरिएको जस्तो लाग्ने हुन्छ । धेरै बढेको बेलामा खप्नै नसक्ने गरेर पेट दुख्ने, दिसा कालो हुने र कहिलेकाही पेट अर्थात आमाशयमा प्वाल परी त्यसको खराब असरले गर्दा ज्यानै जान पनि सक्छ ।
ग्यास्ट्रिकका लक्षणहरु :
— पेट, छाती र घाँटीमा जलन हुनु ।
— अमिलो डकार आउनु ।
— कहिलेकाहीँ उल्टी हुनु ।
— मुखमा अमिलो र तीतो पानी आउनु ।
— अपच हुनु ।
— कहिले कब्जियत त कहिले पखाला लाग्नु ।
— शरीर तातो हुनु ।
— भोक कम लाग्नु वा बढी लाग्नु ।
— टाउको–जीउ दुख्नु, हातखुट्टा पोल्नु ।
— चक्कर लाग्नु ।
— बेचैनी, चिन्ता, क्रोध तथा चिडचिडापन बढ्नु ।
— राम्रोसँग निद्रा नपर्नु, थकाइ लाग्नु ।
समयमा खाना खाने
ग्यास्ट्रिक भएकाहरुले सकेसम्म प्रत्येक दुई–दुई घन्टाको फरकमा खाना खाने गर्नु पर्छ । लामो समय केही नखाँदा पेटमा हावा भरिन्छ र ग्यास्ट्रिकले दुःख दिन्छ ।
प्रशस्त पानी पिउँदा पनि ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ । पर्याप्त पानीले ग्याँस भरिन पाउँदैन र जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम हुन्छ ।
दुध पिउनु शरीरका लागि लाभदायक भएतापनि ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई दुध नपिउनु राम्रो मानिन्छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुको पाचन प्रक्रिया कमजोर हुने भएकोले दुध तथा दुधजन्य खानेकुरा पचाउन निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले दुध नपिउनु नै उत्तम हो । तर, दही तथा दुधबाट बनेका अन्य हल्का परिकारहरु भने खाँदा हुन्छ ।
चिल्लो तथा पिरो नखाने
धेरै तेल प्रयोग भएको तारेको खाना तथा धेरै पिरो खाना नखाने यस्तो खानाले ग्याष्ट्रिक भएकाहरुलाई थप समस्या दिन्छ ।
मद्यपान धुम्रपान नगर्ने
जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनी तथा अन्य सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने यसले ग्याष्ट्रिक भएका व्यक्तिहरुलाई नराम्रो असर गर्छ । त्यसैले यस्तो बानी छ भने छोड्नुपर्छ ।
चिया कफी नखाने
कफी, कडा चिया, दूध चिया, क्याफिन र कार्वन मिसिएका कोल्ड ड्रिंक्स (कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट) नखाने ।
जंकफुडहरुको सेवन नगर्ने
अजिना मोटो मिसाएको खाना र मैदा प्रयोग भएका फाष्ट फुडहरू सकेसम्म नखाने ।
चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधी सेवन नगर्ने
दुखाई कम गर्ने तथा अन्य औषधि चिकित्सकको परामर्शमा मात्र लिने गरौं । पेनकिलरको बढी प्रयोग नगर्ने । पेन किलरले केही समयका लागि राहत दिएतापनि दिर्घकालिन रुपमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।
ग्यास्ट्रिकको समस्या बढ्यो भने अहिलेको अवस्थामा अस्पताल जान सम्भव छैन । त्यसैले घरैमा पेन्टोप्राजोल, रेबिप्राजोल जस्ता औषधिहरुको सेवन गर्न सकिन्छ । तर, समस्या बढेको छ र अल्सर भईसकेको छ भने अस्पताल गएर इन्डोस्कोपी गरेर चिकित्सकको सल्लाहमात्र औषधि खानुपर्छ ।
ग्यास्ट्राइटिस तनावपूर्ण जीवन जिउनेहरू, डर, चिन्ता, खिन्नता, उदासीनता र अनिद्राका रोगीलाई हुने रोग हो । तसर्थ तनाव व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
नियमित व्यायाम तथा हिँडडुल गर्नाले खाएको खाना राम्ररी पच्छ । त्यसैले नियमित रुपमा योग, व्ययाम गर्ने । दिनमा एकपटक पसिना आउने गरि हिँड्डुल गर्ने । यसो गर्दा पनि ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ ।
#डा.सन्दिप राज कुँवर
#पेट रोग विशेषज्ञ